Fetin’ny krismasy 2018 : Samy nanao izay ho afany ny rehetra -
AccueilSosialyFetin’ny krismasy 2018 : Samy nanao izay ho afany ny rehetra
26/12/2018 admintriatra Sosialy 0
Vita iny ny Noely na Krismasy, fankalazana ny nahaterahan’ilay Mpamonjy. Tamin’ny ankapobeny dia nilamina ny fety, mety ho vokatry ny tsy fahampiana na fahasahiranana ka mihafy sy mitsitsy. Hita tokoa fa samy nanao izay ho afany ny mpiara-monina, ary niavaka tanteraka iny fety iny tamin’ity taona 2018 ity. Nahitana ny fisondrotana hatramin’ny fari-piainan’ny olona izany. Fa na izany aza, tsy nahasakana ny olona ny fahalafosan’ny vorona sy ny akoho fa lany avokoa ireo biby fiompy tena an-tsena. Ankoatra izay, nilaharana ihany koa ny tranombarotra rehetra izay nandalovana teto an-drenivohitra. Na mpivarotra enta-madinika izany, na ireo mpivarotra ambongadiny, eny hatramin’ireo tsena lehibe aza. Ao anatin’ny fankalazana ny krismasy izay ihany koa, dia tsy afa-misaraka ny fandravahana ny hazon’ny noely satria manana hasina, lanja ary fiantraikany eo amin’ny fiainana sy ny tontolony ara-panahy. Eo amin’ny tontolon’ny ara-panahy izay indrindra, saika tany am-piangonana avokoa no nankalazan’ny kristianina izany fetin’ny krismasy izany.
Na ny misasakalina izany na ny andron’ny 25 desambra. Tena feno hipoka ny fiangonana rehetra nanomboka ny sasakalin’ny noely ny 24 Desambra izay, nitsenana ny fahaterahan’ny Tompo hatramin’ny fotoam-pivavahana ny 25 Desambra, nankalazana ny andro nahaterahan’i kristy. Ho an’ny kristianina, ny krismasy dia ny hoe, tonga olombelona ny zanak’Andriamanitra hahatonga ny zanak’Andriamanitra ny olombelona. Izany hoe, fahatsiarovana ny nahaterahan’i Kristy, Tompo sy Mpamonjy. Mpamonjy no teraka ho antsika, araka ny finoana kristianina. Tonga hitory ny vaovao mahafaly na ny filazantsara, nanolo-tena hisolo voina ny zanak’olombelona teraka tao amin’ny ota, nandresy ny fahafatesana, hitondra famonjena sy fiainana mandrakizay. Araka izany, tsy tokony handalo fotsiny ihany iny krismasy iny fa natao hisaintsainana, fakana bahana, fiaingana vaovao. Handinihina ny fiainam-panahy. Mitondra inona izao krismasy izao eo amin’ny tena, na ny tokantrano, na ny fiarahamonina, na ny firenena. Eny, ho an’ny tsy kristianina aza, amin’ny lafiny iray, efa zary fanaovana hetsika sy fetin’izao tontolo izao aza ny hoe krismasy ho an’ny sasany. Fanararaotana amin’ny fitadiavana, fialan-tsasatra, fanaovan-danonana. Krismasy fotoana ny fiovana sy fanovana, eo amin’ny fomba fisainana, fomba fiaina, fomba fiasa, ka ohatra amin’izany eo amin’ny fiaraha-miaina sy fiatrehana ny ho avy amin’izay.
Fa tsy diso anjara tamin’ny fankalazana iny fetin’ny krismasy iny ihany koa ireo sahirana. Tsy nitazam-potsiny mantsy ireo olona manana ny omena, toa ireo fikambanana samihafa fa nisy ny fijerena manokana ireo sahirana mialohan’ny krismasy tamin’ny fanomezana kilalao, vatomamy, “biscuit”, vary sy laoka ho an’ireo fianakaviana sahirana. Samy nahazo ny anjara tandrify azy noho izany ny tsirairay nentina niatrika ny fetin’ny krismasy. Tao anatin’ny filaminana tanteraka no nankalazan’ny olona iny 25 Desambra iny. Vory lanona avokoa ny fianakaviana iray manontolo niara-nisakafo sy niara-nifety. Ho an’ireo manana zazakely moa dia feno hipoka ny toerana filalaovana sy fampifaliana ny ankizy kely. Toa ny teny Analakely, Andohatapenaka, Antsonjombe, Ambohijatovo sns…